China Four Way Radio Shuttle System umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
Inkqubo yothungelwano lwerediyo yeendlela ezine inokulungelelaniswa kakuhle nemeko yesicelo esikhethekileyo njengendawo yokugcina izinto ephantsi kunye neemilo ezingaqhelekanga, kwaye inokuhlangabezana neemeko zokusebenza ezinje ngotshintsho olukhulu lwempumelelo yangaphakathi nephumayo, kunye neemfuno eziphezulu zokusebenza kakuhle.Ukusukela ukuba inkqubo yothungelwano lwerediyo yeendlela ezine inokufikelela ukwandiswa kweprojekthi eguquguqukayo kunye nokwanda kwezixhobo, inokuhlangabezana neemfuno zokuya kwi-intanethi kwiibhetshi kwaye inciphise uxinzelelo lotyalo-mali lwabathengi.
◆ Ukulinganisa inkqubo yokulawula kunye nokwenza lula ukusebenza.
◆ Ngokulawulwa kwekhompyutha, i-akhawunti ye-inventory yezinto eziphathekayo icacile, kwaye indawo yokugcina impahla ichanekile.
◆ Ukufakwa kweekhowudi ngokwenzululwazi, kunye nokulawula ikhowudi yemathiriyeli kunye nezikhongozeli.
◆ Konke ukungena kunye nokuphuma kuqinisekiswa ngeekhowudi zokuskena, eziphucula ukuchaneka nokusebenza kakuhle kwemisebenzi.
◆ Ulawulo lwempahla: umbuzo osekelwe kwingcaciso yezinto eziphathekayo, indawo yokugcina, njl.
◆ Uluhlu lwempahla: Itheminali ingasetyenziselwa ukukhetha ngokuthe ngqo izixhobo zokwenza uluhlu kunye nohlengahlengiso lwe-inventri.
◆ Ulawulo lwelogi: bhala yonke imisebenzi xa usebenzisa inkqubo, ukwenzela ukuba umsebenzi unokulandelwa bubungqina.
◆ Ulawulo lomsebenzisi kunye negunya: iindima zabasebenzisi zingachazwa ukunciphisa umda wokusebenza komsebenzisi kunye nokuququzelela ulawulo.
◆ Ukuqonda ukwabelana ngexesha langempela kunye nokulawulwa kwedatha yezinto zokugcina: isiphumo esipheleleyo sengxelo ngokweemfuno, ezifana: iingxelo zemihla ngemihla / zeveki / zenyanga, zonke iingxelo zingathunyelwa kwiifayile.
I-NANJING INFORM STORAGE EQUIPMENT (IQELA) CO., LTD ibonelela ngenkampani eyaziwayo yemoto kunye ne-pallet-uhlobo lwe-four-way system shuttle system solution.Inkqubo sisisombululo esisebenzayo sokugcina esinokwenza ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ukuhlenga kunye nokuchola imisebenzi, gcina indawo kwaye ube nokuguquguquka okukhulu.
Le projekthi ithatha inkqubo yogcino lwenkqubo yogcino lwerediyo eneendlela ezine ezinemigangatho emi-4.Isicwangciso sisonke yindlela enye, iishuttles zerediyo ezi-3, abahambisi berediyo aba-2 abathe nkqo, isikhululo sikanomathotholo sinokuqonda ukusebenza kokutshintsha komgangatho, kwaye inkqubo ixhotyiswe ngezibuko lokuthumela ngokukhawuleza.